आजकल कुनै एक छक्क टमाटर गुलाबी वा पहेंलो, विभिन्न किसिमका विशाल नम्बर उत्पन्न प्रजनकों छ। सबै भन्दा राम्रो गुलाब प्रजातिहरू मध्ये एक मानिन्छ जो टमाटर, - "क्रिमसन घन्टी"। गुलाबी टमाटर माली बीच धेरै लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले उत्कृष्ट स्वाद, कोमल मिठाई मासु र पातलो छाला द्वारा प्रतिष्ठित छन्। गुलाबी टमाटर मानव स्वास्थ्य भिटामिन र खनिज, फाइबर, carotenoids र pectin गर्न आवश्यक छ जो एक धनी रासायनिक संरचना, छ।
"क्रिमसन घन्टी" - प्रारम्भिक maturing टमाटर
गुलाबी टमाटर को यो विविधता भिटामिन र एमिनो एसिड को आफ्नो उच्च सामग्रीको लागि मूल्यवान छ, अझै त्यस्तो लेट blight, प्रारम्भिक blight र तिन्दिवानाम रूपमा रोगहरु गर्न sverhustoychiv। सलाद, पकाउने pastes, purees र रस लागि ठूलो।
"क्रिमसन घन्टी '- प्रारम्भिक-पकने टमाटर। दिन 100-110 पहिलो मार लागि प्रतीक्षा र प्रतीक्षा, माली स्वादिष्ट गुलाबी को पहिलो फल आनन्द हुनेछ। फल यो वर्ग बारे 150-180 ग्राम टमाटर वजन, रसदार मासु संग चपटे, धेरै सुन्दर छ, fleshy हो, गुलाब-क्रिमसन रंग। उच्चतम स्तर मा संकर को Gustatory गुणहरू। तपाईं बिक्री को लागि एक "क्रिमसन Bells" रोपेर निर्णय भने, तपाईं यसलाई पछुताउनु हुनेछ, टमाटर, मात्र हेर्न सुन्दर, तिनीहरूले transportable छन् र सबै भन्दा राम्रो उत्पादन गुणस्तर छ।
उचाइ यो बोट sredneoblistvenny को झाडी 1.3 मीटर गर्न बढ्छ। "सजाया" 5-6 टमाटर ब्रश। हाइब्रिड सुरक्षित र खुला जमीन लागि डिजाइन गरिएको छ।
टमाटर बढ्दै "क्रिमसन Bells"
अप्रिल सुरुमा - टमाटर "क्रिमसन Bells" रोपण लागि बीउ मार्च को दोस्रो आधा 2-3 सेन्टीमिटरको गहिराइमा रोप्न छन्। रोपण अघि, बीउ उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ पोटासियम Permanganate को एक समाधान संग चलिरहेको पानी अन्तर्गत कुल्ला।
जब बिरुवा को पहिलो दुई साँचो पात डुबुल्की मार्न। चिसो को खतरा पूर्ण गायब हुँदा दुई र आधा महिना, - को बेड मा दुई वर्षको उमेरमा बिरुवा रोपिन्छ। खुला जमीन बिरुवाहरु मा बिरुवा को स्थानांतरण अघि सप्ताह आवश्यक स्वभाव गर्न आवश्यक छ। को बिरुवा खुट्टा नीलो रङ्ग प्राप्त गर्दा, यो भूमि मा रोपण लागि तयार छ।
टमाटर "क्रिमसन Bells" प्रकाश, अत्यधिक उर्वर soils रुचाउँछु। यसलाई जहाँ गत वर्ष खीरे, गाजर, सिमी, बन्दागोभी र प्याज थिए स्थानहरू गर्न टमाटर खेत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। रोपण बिरुवाहरु "क्रिमसन Bells" ग्रेड, यो आवश्यक तिनीहरूलाई बीच 40 सेन्टीमिटरको दूरी पालन गर्न छ, र पङ्क्तिहरू बीच - 70 सेमी।
"क्रिमसन घन्टी" - केही विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन कि एक टमाटर। सबै तपाईं टमाटर को अन्य किसिमहरु रूपमा राम्रो गर्न आवश्यक छ। यो तान्नु को यो समय को लागि, सामा संग overgrown टमाटर बेड बच्न आवश्यक छ। बिरुवाहरु न्यानो पानी टीन र माटो loosening आवश्यक छ। यो वनस्पति अवधि तीन पटक Fed सिफारिस जटिल मल। हाइब्रिड लगभग रोग defies, तर बोट अझै पनि बिरामी छ भने, तपाईं तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ। सबै माथि बाहेक, टमाटर बिरुवाहरु को लागि एक विश्वसनीय समर्थन निर्माण गर्न भूल छैन। त्यो लगभग सम्पूर्ण हेरविचार, सबै भन्दा महत्वपूर्ण - यो सबै नियमहरू पालन र समय मा सबै काम गर्न आवश्यक छ।
टमाटर "क्रिमसन Bells": समीक्षा
बित्तिकै यी गुलाबी सुंदरियों को बिक्री रूपमा, तिनीहरूले तुरुन्तै राम्रो समीक्षा उत्पादक प्राप्त गरेका छौं। टमाटर प्रेमीहरूको शब्दहरू देखि, गुलाबी फल "क्रिमसन घन्टी" धेरै स्वादिष्ट र मीठो छ। बिक्री को लागि टमाटर को खेती मा संलग्न छन् गर्नेहरूले यो ऐंसेलु संकर बारेमा बोल्न आफ्नो पर्यवेक्षणका मा पनि सकारात्मक छ, फल 98% marketable छन्। छोटो मा, "क्रिमसन Bells" सराहना। कसले गुलाबी चमत्कार सुरक्षित बीउ र लगाए बिरुवाहरु किन्न सकिएन आफ्नो बेड मा बढ्न प्रयास गरेको छैन। उच्च उपज, यो विविधता पनि (प्रति वर्ग मीटर 18-19 किलोग्राम) प्रदान गर्दछ।
मातृभूमि गेरानियम बिरुवाहरु र फूल को लोकप्रिय प्रकारका
को Leningrad क्षेत्र र उत्तर-पश्चिम लागि स्याउ प्रजातिहरू
स्वादयुक्त र thyme - फरक के? Ornamental र औषधीय बिरुवाहरु
रंग एक फूल वा यस्तो अद्भुत बगैचा गेरानियम लाखौं
राम्रो lactation - आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य को लागि महत्वपूर्ण छ!
रूसी लोक नृत्य - इतिहास र वास्तविक तथ्यहरु
पुरातन मिश्री देवी Maat
Electroplating धातु galvanizing: प्रविधि, उपकरण
Contempo - एक ... Contempo - समकालीन नृत्य
को Sayano-Shushenskaya HPP को शक्ति। Sayano-Shushenskaya HPP: दुर्घटना, रिकभरी
Walleye, ओवन मा सुखा
पोषण लागि खाना: सूची। शरीर शुद्ध गर्न वजन गर्न स्वस्थ खाद्य पदार्थ,